सेलिब्रेटी किड्स शक्ति र कबिताको जोडी कस्तो देखियो ? (फोटो सहित) – cafeguff
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नब कलाकारहरुको प्रबेश निकै भईरहेका छन् । त्यसमा कोही चर्चामा आईरहेका छन् भने कोहीले सोचे अनुसारको चर्चा पाउँन सकेनन् । नब कलाकारहरुको प्रबेशमा यतिबेला सेलिब्रेटी किड्सहरु पनि अग्रपंक्ति परेका छन् । फिल्मी व्याकग्राउण्ड भएकोले नै कुनै सेलिब्रेटीका सन्तानहरु आउँनु , आफनो अभिभावकको बिरासत धान्नु राम्रो नै हो तर बलिउडमा जस्तै नेपाली रजटपतमा पनि कतै नेपोटिज्म हाबी हुन्छ की भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
यसबीचमा एक्सन नायक शिब श्रेष्ठका पुत्र शक्ति श्रेष्ठ र करिश्मा पुत्री कबिता मानन्धरको डेब्युले यतिबेला सबैको ध्यान तानिरहेको छ । करिश्मा आफनी छोरीको डेब्यु आफनै होम प्रडक्सनको चलचित्रबाट गर्न चाहान्थिन् तर उनले शिबलाई नाई भन्न नसकेको कारण स्वीकार गरेको बताईन् । उता शिबले पनि छोराले सधै फिल्म कहिले खेल्ने भनेर सोध्ने गरेकोमा बल्ल समय आएको बताए ।
छोरी शारिरीक र मानसिकरुपमा तयार नभईसकेको बताएकी थिईन् करिश्माले । तर कबिताले आफनो तौल पनि नियन्त्रण नगरीकन उनी फ्लोरमा गईसकेकीछिन् । चलचित्रमा नायिका अलिक मोटी चाहिएकोले पनि कबिता जस्तो छ त्यस्तैरुपमा भित्राईन लागेको बताईएको छ । तर झट्ट हेर्दा शक्ति र कबिताको जोडी चाहि नसुहाएकै हो ??? तर कथा अनुसार बाधिएपनि फिल्म पर्दामा आएपछि नै देखिएला ।
शिब आफैमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित नायक हुन् यस्तोमा शक्ति र शिबबीच तुलना भने हुने नै छ । उता करिश्मा र कबिताको सुन्दरताको तुलना सुरुवातबाट नै हुदै आईरहेको थियो भने अब अभिनयमा पनि उनीहरुबीच तुलना हुने निश्चित छ । तर पछिल्लो समय चलचित्रमा आएका सेलिब्रेटी किड्सहरुमा कमैले मात्र लोकप्रियता र सफलता पाएका छन् । यस्तोमा के शक्ति र कबिताले आफनो बाबा आमाको बिरासत धान्न सक्लान् ?
गिनिज बुकमा नाम लेखाएका विश्वका कान्छा फिल्म निर्देशक ‘सौगात बिष्ट’ बुटवलमा